Myanmar Online Movie
အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့် (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ) Masturbation ဆရာရှင့် ကျမ အခု ရောဂါတခု ခံစားနေရလို့ စိတ်ပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ ရင်ဖွင့်တာပါရှင့်။ ကျမ အသက်က ၃၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ အပျိုပါရှင့်။ ကျမ အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူတယောက် ရှိပါတယ်။ ပြောချင်တာက ကျမ တခါမှ ယောက်ျားနဲ့ တူတူ မနေဘူးပါဘူး။ ချစ်သူရှိတယ် ဆိုတာကလည်း သူက အဝေးမှာပါရှင့်။ ကျမမှာ မကောင်းတဲ့အချက်တခုရှိပါတယ်။ ကျမ လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ် ခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်တည်းက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျမ သွားတိုက်တံ လက်ကိုင်ထူထူနဲ့ဟာမျိုးနဲ့ ၁ နှစ်လောက်ထိ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ပဲ လုပ်ပါတယ်။ မလုပ်ရင်လည်း ကျမ တကယ် မနေနိုင်တော့လို့ပါရှင့်။ အမှန်ဆိုရင်တော့ အဲလိုမျိုးကို မလုပ်ချင်ပါဘူး။ အဲလိုလုပ်တာ အပြစ်ရှိလားရှင့်။ အခု ကျမပြောချင်တာက ကျမရဲ့ သားအိမ်လို့ထင်ရတဲ့ ဘယ်ဘက်ဆီးခုံ အထက်နားက တခါတခါဆိုရင် အရမ်းနာပါတယ်။ ဆိုင်ကယ် စီးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း နာပါတယ်။ နောက်ပြီး လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ရင် အခုနောက်ပိုင်း ကြောက်လို့ ဘာနဲ့မှ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးရှင့်။ အဲဒါဆိုလည်း အဲလိုစိတ် ဖြစ်လာတော့လည်း နာပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါ ကျမ သားအိမ်မှာ ရောဂါများ ရနေတာလား၊ ကျမ လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ်က ခဏခဏ ဖြစ်တာလည်း ရောဂါလားရှင့်။ နောက်ပြီး ကျမ ရည်းစားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရင်ကော ကျမ အဲလိုမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတာ ပြောပြရမှာလားရှင့်။ ကျမကို ဖြေကြားပေးပါရှင့်။ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ် ခဏခဏဖြစ်တာနဲ့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့အကျင့် ရှိတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်စိတ်ဖြစ်တယ်။ အဲလိုမဖြစ်ရင်သာ ဆေးကုဘို့လိုပါတယ်။ ၁၉၅ဝ တုံးက Alfred Kinsey (အဲလ်ဖရက်-ကင်ဆေး) လုပ်တဲ့ သုတေသနအရ ယောက်ျား ၉၂% နဲ့ မိန်းမ ၆၂% ဟာ ဘဝတသက်တာမှာ ဖါသာ-အာသာဖြေတာ လုပ်ကြတာကို သိရတယ်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဗြိတိန်မှာ လေ့လာမှုလုပ်တော့လဲ အသက် ၁၆ နှစ်ကနေ ၄၄ နှစ်ကြား ယောက်ျား ၉၅% နဲ့ မိန်းမ ၉၁% လုပ်ဖူးကြတာ သိရတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန်၊ နယ်သာလင် နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက ဆယ်ကျော်သက်တွေကို နေ့တိုင်း Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်စေဘို့ အားပေးခဲ့တယ်။ Orgasm (အော်ဂဇင်မ်) လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှု ဆိုတာ အခွင့်အရေးတရပ် ဖြစ်တယ်လို့တောင် လက်ကမ်း ကြော်ညာမှာ ပါသေးတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တခုက Teen pregnancy ဆယ်ကျော်သက်-ကိုယ်ဝန်ရမှာနဲ့ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်စေဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ Safe sex လို့ လူသုံးများလာပြီ။ စိတ်ချရတဲ့ လိင်မှုရေးရာလို့ ပြောချင်တာပါ။ HIV-AIDS ရောဂါ၊ အသဲရောင် ဘီ-စီ တွေပါ မကူးစက်နိုင်ပါ။ Benefits ကောင်းကျိုးတွေ • Intercourse တကယ်တန်း လိင်ဆက်ဆံဘို့ အဆင်မပြေချိန်မျိုးမှာ လုပ်နိုင်လို့ တခြားမသင့်တာမျိုး အားကိုးစရာမလိုတဲ့ အစားထိုးနည်းကောင်း ဖြစ်တယ်။ • Masturbation လုပ်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ Fertility မျိုးပွါးစေရေး အားပေးတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် သြစတြေးလျ လေ့လာမှုတခုအရ နေ့တိုင်း သုက်လွှတ်ခြင်းဟာ သုက်ပိုး-ကျန်းမာရေးကို အားပေးတယ်။ • Female masturbation အမျိုးသမီးတွေ ဖါသာ-အာသာဖြေတာကြောင့် ဗဂျိုင်းနာ၊ သားအိမ်ဝ နဲ့ သားအိမ်တွေမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်စေတယ်။ ဒါတွေကနေ သန္ဓေရစေဘို့ ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမယ်။ ကလေးမရလို့ သုက်ပိုးကို အပြင်ကနေ ထည့်ပေးနည်း လုပ်အပြီး ၁-၄၅ မိနစ်အတွင်းမှာ Orgasm ရစေအောင်လုပ်နိုင်ရင် သုက်ပိုးက လိုရာခရီးကို ကောင်းကောင်းရောက်စေတယ်လို့ သိရတယ်။ မ-မျိုးဥနဲ့တွေ့စေဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။ • Female masturbation ကြောင့် သားအိမ်ဝက အချွဲကို အက်စစ်ဓါတ်ပိုစေတာမို့ ရောဂါပိုးဝင်မှာကို အဟန့်အတားပြုရာ ကျတယ်။ • Relieve depression စိတ်ကျတာကို သက်သာစေပြီး၊ Higher sense of self-esteem ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်မှု ပိုစေတယ်လို့ စိတ်ကျန်းမာရေး အရေးအသားတွေမှာ ဖတ်ရမယ်။ • Mutual masturbation ဆိုတာ နှစ်ဦးသား အပြန်အလှန် လိင်စိတ်ဖြေပေးကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုနေရာကို ဘယ်လို လုပ်တာကို တဖက်သား သဘောကျတယ် ဆိုတာကို ဖေါ်ထုတ်ပေးမယ်။ • (STDs) လိင်ကတဆင့်-ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်မှာကိုပါ နည်းစေတယ်။ • Masturbation လုပ်ပြီး Sexual climax ရစေတယ်ဆိုရင် Relaxed ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပြောလျှော့သွားပြီး Contented state ကျေနပ်မှုရစေမယ်။ Drowsiness and sleep အိပ်ပျော်စေမယ်။ • တချို့ဆရာဝန်တွေက (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာဟာ Cardiovascular workout နှလုံး-သွေးကြောဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းလို့ ယူဆကြတယ်။ သွေးတိုးကို ကျစေတယ်။ • ကိုယ်ဝန်မရစေဘူး။ Risks ဘာတွေကို ဂရုစိုက်ရမလဲ • လက်ကို မတိုင်ခင် အသေအခြာ ရေဆေးပါ။ လက်သည်းဖြတ်ထားရမယ်။ လက်မှာ အနာအဆာ မရှိရဘူး။ • အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာပစ္စည်းကြောင့် ဘေးဖြစ်မှာသတိထားပါ။ ဂျာမနီမှာ တခါက အမျိုးသမီးတယောက် ခဲတန်က ဆီးအိမ်ထဲ ရောက်နေတာ ဖြစ်ဘူးတယ်။ ဗဂျိုင်းနား နဲ့ ဆီးသွားပေါက် မှားသွားလို့ဖြစ်တယ်။ • စအိုကို ထိကိုင်ရင် ပိုသတိကြီးရမယ်။ စအိုသုံးသူတွေဆိုရင် Latex gloves (လေးတက်စ်) လက်အိပ်သုံးရမယ်။ ရေကိုအခြေခံလုပ်တဲ့ Lubricant ချောဆီသုံးရမယ်။ စအိုနဲ့ ဗဂျိုင်းနား အပြန်အလှန်လက်သွားတာ မကောင်းဘူး။ • Finger cot (Finger condom) လက်ဖျားထိပ် (ကွန်ဒွမ်) ဆိုတာလဲရှိတယ်။ အထဲမှာ ကျွတ်ကျန်နေမှာကို သတိထားရတယ်။ Methods နည်းလမ်းတွေ “ဘယ်နည်းက အကောင်းဆုံးသလဲ မပြောနိုင်ပါ” လို့ Paul Joannides စိတ်အထူးကုဆရာဝန်က ဆိုပါတယ်။ အများဆုံး သုံးကြတာက (၁) Fingers နဲ့ (၂) Vibrators ကရိယာဖြစ်တယ်။ အမေရိကားမှာတော့ လေ့လာမှုတခုထဲက “အသက် ၁၈ ကနေ ၆ဝ နှစ်ကြားရှိ အမျိုးသမီးပေါင်း ၂ဝ၅၆ ယောက်ထဲမှာ တဝက်ကျော်က Vibrator သုံးတယ်” လို့ Indiana University အင်ဒီယာနာ-တက္ကသိုလ် Center for Sexual Health Promotion က တွဲဖက်-ဒါရိုက်တာ Debby Herbenick ကဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ Masturbation ဖါသာ-အာသာဖြေတာမှာရော Intercourse လိင်ဆက်ဆံရာမှာပါ သုံးကြတယ်။ Fingering လက်ကိုသုံးတဲ့နည်း • Vaginal fingering ဗဂျိုင်းနာထဲ လက်ချောင်းထည့်ခြင်း ဆေးစကားလဲဖြစ်၊ ဥပဒေသုံးလဲဖြစ်တယ်။ လက်ချောင်း တချောင်း၊ တချောင်းမက ဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်တခုလုံးဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်။ • Clitoris မ-အစိ၊ Vulva မိန်းမကိုယ်၊ Vagina (ဗဂျိုင်းနား) တွေကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်တာ၊ ကလိတာ၊ ထိုးသွင်းတာတွေ ပါမယ်။ • ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခုရှိတယ်။ Sexual arousal and stimulation လိင်စိတ်ဖြစ်စေ၊ ကဲစေဘို့နဲ့ Orgasm လိင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝစေဘို့ ဖြစ်တယ်။ • ဒီလိုလုပ်တာချည်းနဲ့ အဆုံးသပ်တာရှိသလို တကယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လဲ Foreplay အစပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် Sexual activities ကြားကာလမှာဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်တယ်။ • Mutual masturbation နှစ်ယောက်သား အပြန်အလှန် အာသာဖြေပေးတာမှာလဲ သုံးနိုင်သလို Finger oneself တယောက်ထဲလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ • မိန်းမတယောက် Orgasm (အော်ဂဇင်မ်) ရစေဘို့ရာ Massage of the vulva မိန်းမကိုယ်နေရာကို ပွတ်သပ်ခြင်းနဲ့ အထူးသဖြင့် Clitoris မ-အစိကိုပွတ်သပ်ခြင်းဟာ အဓိကအရေးပါတယ်။ • Clitoral body မ-အစိကိုယ်ရော Shaft အရင်နေရာပါ သုံးနိုင်တယ်။ အများအားဖြင့် Skin of the clitoral hood မ-အစိအထက်နေရာ အရေပြားကို ထက်-အောက်၊ ဘယ်-ညာ၊ စက်ဝိုင်းလို ကြိုက်သလို လုပ်နိုင်တယ်။ • Labia မိန်းမကိုယ် နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ကျန်နေရာမှန်သမျှကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ Fingering the vagina (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို လက်ထည့်တာလဲ လုပ်ပါတယ်။ • G-Spot ဆိုတာကို ထိမိစေရတယ်လို့လဲ ပြောကြတယ်။ (ဗဂျိုင်းနား) ရဲ့ရှေ့ (ရှေ့ဆိုတာ ပက်လက်အိပ်နေရင် အပေါ်ကိုပြောတာပါ) ၅ စင်တီမီတာနေရာမှာလို့ ဆိုတယ်။ • A-spot က သူ့ထက် ပိုနက်တဲ့နေရာမှာ ရှိတယ်။ • ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာတွေ တကယ်ရှိ-မရှိ ငြင်းနေကြဆဲဖြစ်တယ်။ • ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်လုပ်သူတွေက ဘယ်နေရာကို ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကျေနပ်မှုပိုစေမယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။ ဆရာဝန်မလိုပါ။ သာယာမှုရရင် အရည်ပိုစိုစွပ်လာမှာ အမှန်ပါ။ • G-Spot ejaculation ဆိုတာ ကျေနပ်မှု ကောင်းလွန်းပြီး အရည်ဟာ Urethra ဆီးထွက်လမ်းကနေ ထွက်တယ်။ Urine ဆီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ • အမျိုးသမီးတွေ Orgasm ပြီးတဲ့အခါ ထွက်တဲ့အရည် Female ejaculate ထဲမှာ Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တမျိုးပါတယ်။ အဲဒါဟာ ယောက်ျားတွေ Prostate ဆီးကျိတ်ကထွက်တာနဲ့ အလားတူတယ်။ အတွင်းကျကျအထိ လက်ထည့်ရမှာမို့ လက်ချောင်းသုံးတာကြောင့် A-spot ကိုထိစေဘို့ နည်းတယ်။ Vibrator တုန်ခါမှုရှိတဲ့ ကရိယာနည်း • (ဗစ်တိုးရီးယား) ခေတ်က Female hysteria အမျိုးသမီး (ဟစ်တီးရီးယား) ရောဂါကုသနည်း တခုထဲမှာ Masturbation နည်းပါတယ်။ Pelvic massage လို့သာ ခေါ်သေးတယ်။ ခေတ်ပေါ် Vibrators နဲ့ Sex toys တွေဟာ ၁၉၈ဝ နောက်ကစပြီး ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာတယ်။ • ၂ဝဝ၉ လေ့လာမှုတခုအရ အမေရိကားမှာ ၁၈-၆ဝ နှစ်အရွယ်ရှိ ယောက်ျား ၄၆% နဲ့ မိန်းမ ၅၃% ဟာ Vibrator သုံးသတဲ့။ • မိန်းမ ၃ဝ% ကသာ ပုံမှန် ဖိုမ ဆက်ဆံရာကနေ (အော်ဂဇင်မ်) ရတယ်။ အဲဒါအတွက် Vibrators ကို သုံးဘို့ ဆရာဝန်တွေက ညွှန်တယ်။ Masturbation အတွက်ရော Intercourse အတွက်ပါ အသုံးခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ • Clitoral vibrator ဆိုတာ သပ်သပ်လာသေးပေမဲ့ အားလုံးဟာ ဒီနေရာကို ထိမိစေရတာဖြစ်တယ်။ ဒီဇိုင်းကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ o G-Spot Vibrator ဆိုတာလဲလာသေးတယ်။ ခပ်ကောက်ကောက်ပုံရှိတယ်။ o Dildo-shaped ဆိုတာ ယောက်ျား-အင်္ဂါပုံအတိုင်း အရွယ်တူ လုပ်ထားတဲ့ ကစားစရာမျိုးဖြစ်တယ်။ Plastic (ပလပ်စတစ်)၊ Silicone (စီဘီကွန်)၊ Rubber (ရာဘာ)၊ Vinyl (ဗီနိုင်းလ်) နဲ့ Latex (လေးတက်စ်) ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ o Waterproof လဲရှိတယ်။ ရေချိုးခန်းမှာ သုံးနိုင်ဘို့ ဖြစ်တယ်။ o Egg-shaped vibrator နဲ့ Rabbit ဆိုတာတွေက ဗဂျိုင်းနာရော (ကလိုက်တောရစ်) ကိုပါ ထိမိစေဘို့ လုပ်တားတယ်။ • ကနေဒါနိုင်ငံက (တိုရွန်တို) လေ့လာမှုအရ ဖါသာ-အာသော ဖြေရာမှာ (ဘိုင်ဗရေတာ) ကို အသုံးများရင် တကယ်တန်း ခင်ပွန်း-အဖေါ်နဲ့ဆက်ဆံချိန်မှာ (အော်ဂဇင်မ်) ရတာကို Desensitize ပြောင်ပြန်အကျိုး သက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ သတိပေးတယ်။ အဲဒီ ဆရာဝန်က သူ့လူနာတွေကို (အိုက်စ်ခရင်မ်) ကို နေ့တိုင်း မစားချင်ကြသလို နေသင့်တယ်လို့ အကြံပေးတယ်။ Autonomic nervous system အလိုအလျှောက် သက်ရောက်တဲ့ အာရုံကြောစနစ်က အကျင့်ရသွားစေမယ်လို့ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ • Vibrator သုံးရင် လိင်အင်္ဂါနေရာမှာ နာတာ-ထုံတာ ဖြစ်မလား သတိထားသင့်တယ်။ Herbenick's vibrator survey သုတေသနအရ ၃ဝ% မှာ အဲလိုဖြစ်တယ်။ တခြားနည်းတွေ • တချို့က Back ofavibrating toothbrush head တုံခါမှု လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သွားတိုက်တံခေါင်းရဲ့ နောက်ဖက်၊ • တချို့က Handle ofahairbrush ခေါင်းဘီး လက်ကိုင်ရိုး၊ • တချို့က Water jets in the bathtub ရေချိုးခန်းက ရေပန်း ထိပ်ဖျား သုံးကြတယ်။ • တခြားနည်းနာတွေလဲ ရှိမှာပါ။ ရောဂါမဟုတ်ပါ • မိန်းကလေးတွေလဲ ယောက်ျားလေးတွေလိုဘဲ ဖါသာအာသာဖြေဖျောက်တာလုပ်မိတာကို Feel guilty အပြစ်လုပ်သလို ခံစားတတ်ကြတယ်။ Sex therapists လိင်အထူးကု ဆရာဝန်တွေကတော့ အဲလို မထင်မြင်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ • Mood စိတ်မူ၊ Spirits စိတ်ဓါတ် တက်စေမယ်။ စိတ်ကျနေသူတွေကို သက်သာရာ ရစေမယ်။ Solo sex တယောက်ထဲစခန်းသွားတာမို့ ကိုယ့်အဖေါ် ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတာ စိတ်ကူးထည့်စရာလဲ မလိုဘူး။ • အဲလိုလုပ်တာဟာ ကိုယ့် ခင်ပွန်း-အဖေါ်ကို မချစ်လို့လဲ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုပ်တာသာဖြစ် တယ်။ သူနဲ့နေတဲ့အခါမှာလဲ ပိုပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်စေနိုင် သေးတယ်။ သူ့ကိုကိုယ်ကနေ ဘယ်လိုကဘယ်လိုဆိုတာ ဆရာလုပ်နိုင်တယ်။ • ယောက်ျားနဲ့နေလို့ (အော်ဂဇင်မ်) မရတတ်သူတွေ ဒီနည်းနဲ့ကူနိုင်တယ်။ Lubrication စိုစွပ်မှု၊ Desire ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မှု၊ Arousal စိတ်နိုးထမှု နဲ့ Orgasm (အော်ဂဇင်မ်) တွေမျာ ပိုကောင်းစေတယ်။ • Pain နာတတ်တာလဲ သက်သာစေမယ်။ မနာတတ်သူတွေလဲ သုံးကြတာပါဘဲ။ • သိတဲ့အတိုင်း အမျိုးသမီးများဟာ စိုးရိမ်မှုများတတ်တယ်၊ ဖိစီးမှုများတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဖြေလျှော့ပေးဘို ပိုလိုမယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) ကနေ ကူညီနိုင်တယ်။ • Migraine (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ရှိသူတွေကိုလဲ သက်သာရာ ရစေနိုင်တယ်။ ခပ်ရှားရှား တချို့လူနာတွေမှာ (အော်ဂဇင်မ်) ကနေ (မိုင်ဂရင်း) ထတတ်တယ်။ • Menstrual cramps ရာသီလာရင်နာတာ နဲ့ Premenstrual syndrome (PMS) ရာသီအလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ ကိုပါ သက်သာစေမယ်။
ယ​နေ့နံနက်​ ဘုန်းကြီး​ကျောင်း တခု၌ ဓားပြတိုက်​အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွား ၂၁..၁..၁၇ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့တွင် ယ​နေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က (၆) ရပ်ကွက် မြတောင်ကျောင်းတိုက်မှ သက်တော် ၈၅ နှစ်၊ဝါတော် ၆၅ ဝါရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် တစ်ဦးထဲရှိနေစဉ် လူနှစ်ဦးခန့် မှ ဓားပြတိုက်​အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဆရာတော်၏ ဦးခေါင်းနောက် စေ့နားတွင် တစ်လက်မခွဲခန့်ရှိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ ကားငယ်တစ်စီးနှင့် ကျောင်းတိုက် အပေါ်ခန်းများခတ်သည့် ​သော့တွဲများ ယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆရာ​တော်​၏ဘွဲ့ အမည်​မှာ ဦးတိက္ခဝံဿဖြစ်​ပြီး ယခုအကြိမ်​ ဓားပြတိုက်​ခံရခြင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်​ဖြစ်​ပြီး ပထမအကြိမ်​ ဓားပြတိုက်​ခံရစဉ်​က ကျပ်​ သိန်း ၁၆၀ ဖိုးခန့်​ပါသွား​ကြောင်း ဓားပြတိုက်​ခံရသည်​ကို ရှက်​၍ မ​ပြောခဲ့ တာဖြစ်​​ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်​။ - ယခုအကြိမ်​ ဓားပြတိုက်​ခံရမှု​ကြောင့်​ မည်​၍မည်​မျှ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်​ကို စာရင်းပြုစု​နေဆဲဖြစ်​ပါတယ်​ ​လော​လောဆည်​သိရှိရမှု စာရင်းအရ ကားတစီးပါသွား​ကြောင်း သိရှိရပါသည်​ ဘုန်း​တော်​ကြီး​ကျောင်းအား အနုကြမ်းစီးဓားပြတိုက်​​နေစဉ်​ ​လေ​သေနတ်​သံဟု ယူဆရ​သော ​သေနတ်​သံ​တွေ ကြားရ​ကြောင်း အနီးပတ်​ဝန်းကျင်​တွင်​ ​နေထိုင်​သူများကပြောပါသည်​။
အနုကြမ်းစီးသွားသူ နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးအား ဆရာတော်မှ မှတ်မိကြောင်းနှင့် ဆွမ်းချိုင့်လာပို့သည်ဟု ထင်သောကြောင့် တံခါးဖွင့်ပေးရာမှ အရိုက်ခံ ရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တစ်ဦးမှာ ဆံပင်ရှည်ဖြင့် လူငယ်တစ်ဥိီးဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်ကမိန့်ကြားသည်။ =========
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ခေါင်းနဲ့ ခြေထောက်ကို သစ်သားတုတ်နဲ့ရိုက်နှက်ပြီး နေအိမ်ကိုမီးရိူ့တဲ့ သား ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၁၊ ရန်ကုန်။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနမ့်စန်မြို့မှာ သားဖြစ်သူက မိခင်ဆီကငွေ၁၅သိန်းတောင်းတာမရလို့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ခေါင်းနဲ့ ခြေထောက်ကို သစ်သားတုတ်နဲ့ရိုက်နှက်ပြီး နေအိမ်ကိုမီးရိူ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီကိုသွားကာတိုင်ကြားနေချိန်မှာ နေအိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ နမ့်စန်ရဲစခန်းမှူးတင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။ သူက” ကောင်လေးက အရက်သေစာသောက်စားထားတာတော့မရှိပါဘူး။ ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမနက်ဆိုတော့လေ သူ့အမေနဲ့ စကားများလို့လုပ်တယ်လို့ပဲပြောတယ် သူကိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချတော့ သူကမနေစေချင်ရင် ပိုက်ဆံပေး ဆိုပြီး ပြောတာကနေ စကားများကြတာပါ “လို့စခန်းမှူး တင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ဟာ သည်လ(၂၀)ရက်နေ့ မနက်(၆)နာရ်ီက နမ့်စန်မြို့ (၃)ရပ်ကွက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့် နေအိမ်တစ်လုံးဆုံးရူံးခဲ့ရပြီး နေအိမ်အနီးကတစ်ခြားအိမ်တွေကို ကူးစက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ သိရပါ တယ်။ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ နမ့်စန်ပြည်သူဈေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နောက်အိမ်ထောင်အမျိုးသားဟာ နေအ်ိမ်ကိုမီးရိူ့ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူ နဲ့အသက်ရွယ်တူဖြစ်ပြီး အဆိုပါကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း သားအမိနှစ်ဦးမကြာခဏစကားများလေ့ရှိတယ်လို့ နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်နီးချင်း အချို့ကပြောပါတယ်။ ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ နမ့်စန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဦးနေဇော်နိုင်က “ သူ့အမေက ခေါင်းသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်။ဒူးခေါင်းတွေနားမှာတော့ နည်းနည်းပွန်းပဲ့သွားတာပေါ့။ ကောင်လေးကအကြီးဆုံးသား ပါ။ဖြစ်တဲ့အချိန်သူတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ပဲရှိတာ သူတို့အဖေကဆုံးသွားတာကြာပြီ။ သူ့အမေရဲ့နောက်အိမ်ထောင်က တခြားရပ်ကွက်မှာနေတာပါ။“လို့ပြောပြပါတယ်။ မိခင်ကိုရိုက်နှက်ပြီးနေအိမ်ကိုမီးရိူ့ခဲ့တဲ့အသက်၂၂ နှစ် အရွယ်မောင်ကိုကိုဦးကို နမ့်စန် ရဲစခန်းက မီးရိူ့မှုပုဒ်မ ၄၃၆၊ တုတ်ရိုက်မှု ပုဒ်မ ၃၂၅ နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ယာဉ်​ထိန်​ရဲက နံပါတ်​တုတ်​ဖြင့် လှမ်းရိုက်ခံရတဲ့ လူငယ်ယ်​လေး ဆုံးသွားရှာပြီတဲ့..။ ဖြစ်စဉ် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။ ဖြစ်​စဉ်​မှာ ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး၊ ဒလမြို နယ၊် မြိုမတစ်ရပ်ကွတ်တွင်နေထိုင်သူ ကိုဇော်မင်း မလီိုင်လှိုင်၏သား မောင်ထူးအောင် ခ ထူးထူးအောင် အသက် ၁၉ နှစ် နှင့်​ မောင်ဝေဠုကျော်​ အသက် ၁၈ နှစ်တို့သည် (၁၄.၁.၂၀၁၇)ရက်​ စ​နေနေ့တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်​မှဒလမြို့သို့ပြန်လာစဉ် တာကြီးကျောင်းစုယာဉ်​ထိန်းရုံးအနီး ဆ်ုင်​ကယ်​စီးဦးထုပ်မဆောင်းဘဲ ​မောင်းနှင်​သူများအား ဖမ်းနေသည်ကိုမြင်၍ ၎င်းတို့စီးလာသည့်​ဆိုင်​ကိုယ်​ကို ပြန်လှည့်လာစဉ် ဆောင်းကဖီးဆိုင်ရှေ့အ​ရောက်​ ယဉ်ထိန်းရဲ အောင်ထက်ပိုင်ဦးက နံပါတ်​တုတ်ဖြင့်ထွက်ရိုက်​သဖြင့် ဆိုင်​ကယ်​အနောက်မှစီးနင်းလာသော မောင်ထူးအောင်အားရိုက်မိကာ ရှေ့သို့ထိုးကျသွားပြီး ဆိုင်ကယ်​လည်း ​မှောက်သွား​ကြောင်း၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်​သူ ဝေဠုကျော်၏ဦး​ခေါင်းကွဲသွားပြီး တုတ်​ဖြင့်​ရိုက်​ခံရပြီးပြုတ်​ကျသွားသူ မောင်ထူးအောင်မှာ သတိပြန်မလည်လာတော့​ကြောင်း..
၎င်းယဉ်ထိန်းရဲသည်​ သတိ​မေ့ပြီးလဲ​နေသူ မောင်ထူးအောင်အား ခြေထောက်ဖြင့်ကန်၍ သေမှအေးသည် ဟုပြော​ကြောင်း၊ ထိခ်ုက်​ဒဏ်​ရာရ​နေသူများကို အခင်းဖြစ်နေရာမှ ​ဆေးရုံသို့မပို့သေးပဲ လှည့်​ကင်းကား ​ရောက်​လာသောအခါမှသာ ၎င်းလူနာ ၂ ဦးအား ဒလဆေးရုံသို့ပို့ပြီးထားခဲ့​ကြောင်း၊ တာဝန်သိပြည်သူများကလိုက်လာပြီး ရန်ကုန်အရေးပေါ်ဌာနသို့ပို့​ပေးကာ မိဘများထံသို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသဖြင့် မိဘများက ဆေးရုံသို့လိုက်သွားခဲ့​ကြောင်း၊ ​မောင်ထူးအောင်​အား ဓာတ်မှန်ရိုက်ရာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း မကောင်းတော့ပါဘူးဟု ပြော​ကြောင်း၊ အောက်စီဂျင်ပေးနေရင်း (၁၆.၁.၂၀၁၇) နေ့လည် (၁၁း၅၀)တွင် ဆေးရုံ၌ကွယ်လွန်သွား​ကြောင်းသိရသည်​။
ဆိုင်​ကယ်​​မောင်းနှင်​သူ မောင်ဝေဋ္ဌုကျော်မှာ ခေါင်း၌ ၃ ချက်​ ချုပ်ရပြီး အာမခံဖြင့်ပြန်လွှတ်​ပေးကာ ရိုက်နှက်​သူယဉ်ထိန်းရဲက မောင်ဝေဠုကျော်အား ပုဒ်မ ၂၇၉.၃၃၇.၃၃၈ ဖြင့် တရားစွဲထားပြီး မောင်ထူးအောင် သေဆုံးသွားသောအခါ ပုဒ်မ ၃၀၄ ဖြင့် စွဲချက်ပြန်တင်ထား​ကြောင်း၊ သေဆုံးသူ မောင်ထူးအောင်၏ ဖခင်သည်​ ၎င်း၏သားဖြစ်​သူမှာ ယာဉ်​ထိန်းရဲက တုတ်​ဖြင့်​ရိုက်​သဖြင့်​ ဆိုင်​ကယ်​​နောက်​မှပြုတ်​ကျပြီး ​သေဆုံးသွားရခြင်း​ဖြစ်​​ကြောင်းကို မျက်မြင်သက်သေများစွာ ရှိသောကြောင့် ဒလမြို့နယ်​ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်အမှုဖွင့်သောအခါ ယာဉ်ထိန်းရဲက အမှုဖွင့်ထားသဖြင့် ​သေးဆုံးသူဘက်မှ အမှုဖွင့်၍ မရဟု ပြောကြောင်းသိရသည်​။
အသက်​အန္တရာယ်​ကင်းရှင်း​စေရန်​ ဆိုင်​ကယ်​စီးနင်းသူများအား ဦးထုပ်​​ဆောင်း​စေရန်​ ပညာ​ပေးခြင်းနှင့်​ လိုက်​နာခြင်းမရှိသူများအား အ​ရေးယူခြင်းပြုရန်​ ဥပ​ဒေပြဌာန်ုးထားသည်​ကို အခွင့်​အ​ရေးယူလျှက်​ မ​လျော်​ကန်​စွာဖြင့်​ တုတ်​ဖြင့်​ရိုက်​ဖမ်းခြင်း​ကြောင့်​ ဆိုင်​ကယ်​​မှောက်​၍ အသက်​​သေဆုံးသည်​အထိဖြစ်​​စေရခြင်း၊ ​ယာဉ်​ထိန်းရဲ၏မဆင်​မခြင်​ ရမ်းကားရိုက်​နှက်​ ဖမ်း​ဆီးခြင်းကြောင့်​ ဆိုင်​ကယ်​​မှောက်​ပြီး အရိုက်​ခံရသူမှာ အသက်​​သေဆုံးရသည်​ကို ဆိုင်​ကယ်​​မောင်းသူလူငယ်​အ​ပေါ် အပြစ်​ပုံချရန်​ကြိုးစားခြင်းသည်​ လုပ်​က်ိုင်​ခွင့်​တာဝန်​ကို အသုံးချပြီး တရားဥပ​ဒေကို ချိုး​ဖောက်​ခြင်းသာဖြစ်​သည်​။ ယာဉ်​ထိန်းဖြစ်​သူ ​အောင်​ထက်​ပို​င်​ဦး၏ မဆင်​မခြင်​ရမ်းကားမှု​ကြောင့်​ လူငယ်​တစ်​ဦးမှာ အသက်​ဆုံးရှုံးလိုက်​ရပြီး ကျန်​လူငယ်​တစ်​ဦးမှာလည်း မ​လျော်​ကန်​​သောပုဒ်​မဖြင့်​ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းသည် တပ်​ဖွဲ့အ​ပေါ် ပြည်​သူလူထု၏ ယုံကြည်​​လေးစားမှုပ​ပျောက်​​စေသည့်​အတွက်​ အမှုမှန်အတိုင်းသာဖြစ်​​စေရန်​ အထူးလိုအပ်​ပါ​ကြောင်း....
မာ၊ ကြီး၊ ရှည် ဖြစ်ချင်တဲ့ အမျိုးသားများ အထူးသတိထား
လိင်တံနဲ့ ကပ်ပဲ့အိပ်ထဲထိုးနည်းမှာ ဆရာ ဖေါ်ပြထား တာတွေအပြင် ဘာ (ဆိုက်အဖက်) တွေရှိ နှိုင်ပါသေးလဲခင်ဗျာ။ဥပမာ ဆီးသွာခြင်းကို ထိခိုက်စေနှိုင်ပါသလား။ နောက် အသက်ကြီးလာလို့ ရေရှည်မှာ ဘာဆိုးကျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်ပေါ်နှိုင်ပါသေးလဲ။ ဆရာ့ဆေးခန်းမှာ လုပ်ပေးပါသလား။ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း ယေဘုယျနည်းတွေ (၁) မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ မေးလာတာရှိလို့ နည်းတနည်းကို ဆေးပညာ ရှုဒေါင့်က ရေးပါ့မယ်။ Injection of liquid silicone into the penis and the scrotum ကျားလိင်အင်္ဂါ (လိင်တံ နဲ့ ကပ်ပဲ့ပိတ်) ထဲကို (စီလီကွန်) ဆေးထိုးပေးနည်း ဖြစ်တယ်။ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေနည်းတွေ အမျိုးမျိုး စမ်းကြ၊ လုပ်ကြတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတယောက် အရပ်ရှည်ချင်တာဟာ လွယ်တာ မဟုတ်ပါ။ တခြား ကြွက်သားတွေ သန်အောင်၊ ထွားအောင်တော့ သေခြာပေါက် လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရိုး အခြေခံတဲ့ လူ့အရပ်၊ အရိုးလည်းမပါ၊ ကြွက်သားအစစ်လဲ မပါတဲ့ လိင်အင်္ဂါကို ပြုပြင်ဘို့ မလွယ်ပါ။ဒီနည်းရဲ့ထူးခြားမှုက အလျင်အမြန် သိသာစေနိုင်တဲ့နည်း ဖြစ်ပေမဲ့ လူကြိုက်များလှတော့ မဟုတ်ဘူး။ သိသာမှာက Girth လုံးပါတ် တိုးလာတာ ဖြစ်တယ်။ Shaft အရှည်ကို တိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ အများစုကတော့ ၉ဝ% တိုးစေကြတယ်။ သိပ် ထူးခြားချင်သူတချို့က Penis volume ထုထည် ၉ဝဝ% တိုးစေအောင်အထိ စံချိန်တင်ထားတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။အဲ့့ ဒါပေမဲ့ ဘာအသုံးကျပါသလဲ မေးရင်၊• လိုတာ မရောက်ဘဲ (ကန်တော့ပါ) “သေးပေါက်တာသာ ထူးစေပါသတဲ့”။• ဒီဆေးထိုးလိုက်လို့ ကောင်းလာတာဖြစ်ဖြစ် ဆိုးလာတာဖြစ်ဖြစ် Irreversible အရင်လိုတော့ ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။• Silicone ဆေးထိုးလိုက်ရင် Blood vessels သွေးကြောတွေနဲ့ Nerves အာရုံကြောတွေကို Disrupting သက်ရောက် နှောင့်ယှက်မှု ဖြစ်စေနိုင်တယ်။• ရလဒ်ကတော့ Loss of sensation အာရုံခံနိုင်မှုနည်းပြီး Penetration လိင်အင်္ဂါ ထိုးသွင်းမှုကို ခက်ခဲစေမယ်။• ကိုယ်လိုချင်တာက ကြီးဘို့သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဆက်ဆံမှုသာဆိုရင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေပါမယ်။တခြား Side effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိအုံးမယ်။• Inflammation ရောင်ရမ်းတာနဲ့ Discoloration ဆေးထိုးရာ နေရာတဝှိုက် အရောင် ပြောင်းလဲသွားမယ်။• Silicone ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ Granulomas အသားနုဟာ ရောင်နေတဲ့ Nodules အကျိတ်လို ဖြစ်တယ်။• Silicone ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ တခြားနေရာတွေဆီကိုလဲ Migrate ရွေ့ပြောင်းနိုင်တယ်။ဒါ့ကြောင့် FDA က အသိအမှတ်ပြုဘို့ ငြင်းထားတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်ထုတ်ချင်ရင် မရဘူးတော့ မဟုတ်ပါ။ ကရိကထများပြီး ဈေးကြီးတယ်။ ဒီဆေးထိုးထားတဲ့ လိင်အင်္ဂါဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တာ သိသာနေမယ်။သုတေသနတခုမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်က ဆေးအများကြီး ထိုးထားခဲ့သူ ဘယ်လ်ဂျီယန် နိုင်ငံသားတဦး Silicone foreign body reaction ရတယ်လို့ ရောဂါဗေဒအသုံးက ခေါ်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ Massive edema အလွန်ရောင်နေတယ်၊ Impotence ပန်းသေသွားတယ်။ Pills ဆေးလုံး၊ Patches ဆေးကပ်ခွါ၊ Traction devices ဆွဲဆန့်ကရိယာတွေလောက် လူသုံး မများပါ။ ကျွန်တော့် ဆေးခန်းမှာ မလုပ်ပါ။
အမျိုးသမီးတိုင်း သိသင့်တဲ့ မိမိလျို့ဝှက်နေရာ လွယ်ကူစွာ သန့်စင်နည်း (၇) ခု
အမျိုးသမီးတွေ အများဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြသနာက မွေးလမ်းကြောင်းပြသနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းပြသနာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ မိမိပြသနာကို တစ်စုံတစ်ဦးထံ ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ အရှက်ပိုနိုင်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြောဆိုရမှာ ပိုလို့တောင် ရှက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဒီအဆင့်အဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်တချို့ကို လိုက်နာပါက မိမိပုဂ္ဂလိကနေရာကို ကျန်းမာသန့်ရှင်းအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက မွေးလမ်းကြောင်းကို ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပြီး ရောဂါကင်းဝေးစေမယ့် သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက တချို့သာ ရှိပါသေးတယ်။၁။ အရင်ဦးဆုံး အနံ့ဆိုးမထွက်အောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ချည်သားအဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ပါ။ ၂။ အမွေးသေချာ ရိတ်ပြီး အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းအောင်ထားပါတယ်။၃။ ရောဂါကူးစက်မှုကင်းဝေးစေဖို့အတွက် အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။၄။ ဘာအညစ်အကြေးမှ အထဲမဝင်အောင် တင်ပါးကို အမြဲတမ်း နောက်ဆုံးမှ ဆေးပါ။၅။ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ စအိုကြား နေရာကို သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပါ။၆။ (မိန်းမအင်္ဂါ) ရဲ့နှုတ်ခမ်းသားအောက်ပိုင်းကို ဘေးလှန်ပြီး clitoris အစေ့တဝိုက်ကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။၇။ ဆပ်ပြာအပျော့နဲ့ဆေးတာက ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ပေးပြီး ရောဂါနဲ့ ကင်းဝေးစေ ပါတယ်။
အဲ့လိုပါခဲ့ရင်တော့နော်..ရှယ်ပဲ..။ နှိပ်ကြည့်လိုက်..။ ပါတဲ့သူတွေက ကွန်မန့်ကနေ ကြွားပြကြရအောင် သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာ " X " လက္ခဏာလေး ၏ ကောင်းကျိုး များ...! လက်ဖဝါးပြင် နှစ်ခု စလုံးမှာ "X" လက္ခဏာလေး ပါရှိပါက ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်တက် ပါတယ်။ ဒီလို လက္ခဏာ ပါဝင်တဲ့ သူတော်တော်များများက အောင်မြင်တဲ့ လူကြီး လူကောင်းတွေ ဖြစ်တက်တယ်။ လူသားအားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းမွန်တယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု့တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတက်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ကြည့်ကောင်းတယ်။ အချိန်ကို ပေးဆပ်ထားသလောက် အလုပ်အကိုင်တွေ မှာတိုးတက်မှု့ရှိတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိတယ်။ အကောင်းဆုံး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီလို လူမျိုးများ သေဆုံး သွားရင်တောင်မှ နာမည်ကောင်းကျန်နေရစ်ခဲ့ လူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ Posted by
16.01.17 က်နေ့အတွက် 3Dကံထူးရှင်ဖြစ်ချင်သူးများ ဒီPostကိုရှယ်ပါ ကွန်မန့်မှာ 3Dရေးပြီး ဝင်ကြည့်ရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ။အပိုင် ၃ကွက်ပေးထားပါတယ်။100%ပေါက်ပါမည်။
ပေါက်ရင်အလှူပေးပါ။ ဘုရား ဘုရား ၀တ်မှုံရွှေရည်တဲ့ လုံးဝထင်မထားဘူး။၁၈ပြည့်မှကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ဘုရား ဘုရား လင်နဲ့မယားတွေတောင် ဒီလိုမတင်ရဲဘူး | ပုံများကြည့်ရန်*** ၁၈ပြည့်မှကြည့်နော်။
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဘုရားကြီးနယ်မြေ ရဲစခန်းအပိုင်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး(လမ်းဟောင်း) မိုင်တိုင်အမှတ် ၆၆/၁ နှင့်၂ အကြား ၀မ်းဘဲအင်းကျေးရွာ အနီးတွင...
ဘုရား ဘုရား တောနက်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းကို ၀ါးမြိုဖို့လုံးထွေးနေတဲ့ မြွေကြီး အသက်ပေးပြီး ကူညီနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းများ . ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ။
အောက်ပါLinkလေးမှာဝင်ကြည့်ပြီးဒေါင်းပါခင်ဗျ ဘရား ဘုရား အင်တာနက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျောက်ဆည်မှချောင်းရိုက်တဲ့။ 18နှစ်ပြည့်မှ ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
အောက်ပါLinkလေးမှာဝင်ကြည့်ပြီးဒေါင်းပါခင်ဗျ 16.01.17 ရက်နေ့အတွက် 3D ကံထူးရှင်ဖြစ်ချင်သူများ Post ကို ရှယ်ပေးပြီး ၀င်ကြည့်ရန် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။ အပိုင်နှစ်ကွက်ပေးထားပါတယ်။ 100%ပေါက်ပါမည်။
ဘုရား ဘုရား အင်တာနက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တဲ့။မကြည့်ရသေးသူများအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးတဲ့သူများ ကျော်သွားလိုက်ပါ။
အောက်ပါLinkလေးမှာဝင်ကြည့်ပြီးဒေါင်းပါခင်ဗျ ဘုရား ဘုရား ဒီလောက် ၀ုန်းနေတာ အဲ့ဒါကလေးတဲ့လား..? ပြောပြရင် ယုံနိုင်စရာမရှိဘူး နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့..။ အကုန်သိ အကုန်တတ်နေလိုက်တာများ..။ . ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်နှိပ်ပါ။
အောက်ပါLinkလေးမှာဝင်ကြည့်ပြီးဒေါင်းပါခင်ဗျ ဘုရား ဘုရား လင်နဲ့မယားတွေတောင် ဒီလိုမတင်ရဲဘူး | ပုံများကြည့်ရန်*** 2
Tin Htwe. Watermark template. Powered by Blogger.